အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းဝင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များအား ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းရေးရာကော်မတီ၊ ဒုတိယအကြီးအကဲ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမြဲတမ်းကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များရေးရာကော်မရှင် အကြီးအကဲ၊ H.E. Mr. Tran Van Tuy ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က လာရောက်တွေ့ဆုံသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ | အမျိုးသားလွှတ်တော်
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းဝင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များအား ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းရေးရာကော်မတီ၊ ဒုတိယအကြီးအကဲ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမြဲတမ်းကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များရေးရာကော်မရှင် အကြီးအကဲ၊ H.E. Mr. Tran Van Tuy ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က လာရောက်တွေ့ဆုံသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ